Komiti yeSeneti Yoongorora Mamiriro Akaita Zvinhu Mumajeri
Komiti yedare reseneti inoona nezvekodzero dzevanhu iri kushanyira majeri ari munyika ichiona magariro akaita vasungwa, zvavanodya uye zvekupfeka, pamwe nemamwe matambudziko kana budiriro muzvinhu zvavanosangana nazvo.
Sachigaro wekomiti iyi, VaMisheck Marava, vanove seneta weZaka, vanoti ivo nekomiti yavo vari kushanya mumatunhu eBulawayo neMatabeleland North, uko vakashanyira majeri eKhami neBinga. Komiti iyi yakatoshanyirawo kare matunhu eMashonaland, Midlands pamwe neMutare.
Komiti iyi iri kutarisirwawo kushanyira jeri reHwange. VaMarava vanoti kunyange hazvo zvinhu zvati shandukeyi zvishoma kubva zvazvakanga zviri mumakore a2007 na2008, hupenyu huchiri kuomera vasungwa, zvikuru madzimai ane vana vadiki.
Majeri emunyika anotarisana nematambudziko makukutu, zvikuru ekuwanira vasungwa chikafu, mbatya nemishonga.
Zimbabwe ine majeri makumi mana nemaviri, ayo anotarisirwa kunge achichengetedza vasungwa zviuru gumi nezvinomwe. Asi munguva dzakawanda majeri aya anonzi anenge aine vasungwa vangada kusvika zviuru makumi maviri.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemitemo, VaObert Gutu, vanoti pari zvino majeri emunyika ane vasungwa zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu, zviuru zvitatu nemazana mashanu vari vasungwa vakamirira kutongwa.
Mazuva apera munyori mubazi rezvemitemo, VaDavid Mangota, vakati hurumende iri kurasikirwa nemamiriyoni emadhora kuburikidza nekuchengeta vasungwa vakamirira kutongwa.
Hurukuro naVaMisheck Marava